ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အနောက်မြောက်ပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းငယ် ဖြစ်ပေါ်နိုင်
Leaveacomment Uncategorized စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ခန့်မှန်း
GFS ကွန်ပျူတာမော်ဒယ် ခန့်မှန်းချက်များအရ စက်တင်ဘာလ ၂၃ ရက် နေ့ပိုင်းခန့်မှ စတင်၍ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် လေဖိအားနည်းဆဲလ် တစ်ခု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ပိုမိုအားကောင်းလာနိုင်ကြောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်၊ မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၂၄း၃ဝ နာရီတွင် သိသာစွာ အားကောင်းလာပြီး လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်မှ မုန်တိုင်းငယ်အဆင့်ထိအောင် ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း တွေ့ရပြီး အရှေ့မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။(ပုံ)
စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက် မတိုင်မီ မုန်တိုင်းသည် အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ချိုးကွေ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ သြရိသပြည်နယ်နှင့် အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် နယ်စပ်ကမ်းခြေသို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားမည့် အခြေအနေ မတွေ့ရသေးသော်လည်း အထက်ပါ ကာလအတွင်း မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မိုးသည်းထန်ဦးမည့် အခြေအနေများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်း သတိပြုနိုင်ကြရန် တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
. . . → Read More: စက်တင်ဘာလကုန်ပိုင်း ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုန်တိုင်း ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ကွန်ပျူတာမော်ဒယ်မှ ခန့်မှန်း
Leaveacomment Uncategorized ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် အိန္ဒိယ အရှေ့တောင်ဘက်ကမ်းခြေအား တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် Cuddalore မြို့ အနီးမှ ကပ်၍ ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။ ကုန်းတွင်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်ကာနီးတွင် အင်အားလျော့ကျသွားနိုင်သည်ဟု JTWC မှ ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း အနည်းငယ်မျှသာ လျော့ကျမှု ရှိခဲ့ပြီး အဆင့်-၁ အလွန်အင်အားကောင်းသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဖြင့်သာ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်နေဆဲဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ယနေ့နံနက် အိန္ဒိယ စံတော်ချိန် ၅ နာရီတွင် ကမ်းခြေအားဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပြီး၊ လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်မှ ၉၀ မိုင်နှုန်းအထိ တိုက်ခတ်နိုင်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဒီလှိုင်းအမြင့် ၁၇ ပေ အထိ ရှိနိုင်ပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားကာ ကုန်းတွင်းမုန်တိုင်းအဆင့်မှ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းအဆင့်သို့ ရောက်ရှိပြီး တဖြည်းဖြည်းအားပျော့ပျက်ပျယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် မုန်တိုင်းအကြွင်းအကျန်များသည် . . . → Read More: ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE အိန္ဒိယကမ်းခြေအား ဆက်လက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
One comment Uncategorized ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE အိန္ဒိယအရှေ့တောင်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
By mmweather.ygn, on December 29th, 2011%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော အလွန်အားကောင်းသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE(သိမ်း) သည် မူလခန့်မှန်းလမ်းကြောင်းအတိုင်း အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားပြီး CHENNAI(ယခင် Madras) မြို့ တောင်ဘက် မိုင် ၉၀ ခန့်အကွာ၊ Cuddalore မြို့ပေါ်မှ ကုန်းတွင်းသို့ စတင်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိပါသည်။
မုန်တိုင်းဗဟိုသည် Cuddalore မြို့နယ် မြောက်ဘက် ၂ မိုင်ကျော်ခန့်၊ Then Pennai နှင့် Kollidam မြစ်ဝများအနီးမှ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားပါသည်။ (လမ်းကြောင်းပြပုံတွင် ကြည့်ပါ)
JTWC မှ ခန့်မှန်းထုတ်ပြန်ထားသည့်အတိုင်း၊ Vertical Wind-shear မြင့်တက်လာပြီး၊ Radial Outflow ကျဆင်းလာခြင်းနှင့် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန် ကျဆင်းနေခြင်း စသည့် အချက်များကြောင့် ကုန်းတွင်းသို့ စတင် ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်စဉ် အားအလွန်ကောင်းသော . . . → Read More: ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE အိန္ဒိယအရှေ့တောင်ကမ်းခြေအား ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လျှက်ရှိ
Leaveacomment Uncategorized အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တော့မည်
အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် မူလခန့်မှန်းထားသည့် လမ်းကြောင်းမှ တောင်ဘက်သို့ (မိုင် ၆၀ ခန့်) ရောက်သွားပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ်၊ Chennai မြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၈၀ ခန့်၊ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်တောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်းသည် အားအလွန်ကောင်းသော အဆင့်-၁ (CAT-1) ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး မုန်တိုင်းဗဟိုတွင် လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီ ၈၅ မိုင်မှ ၁၀၅ မိုင်အထိ ရှိကြောင်း၊ မုန်တိုင်းမျက်စေ့ ရေးရေးပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း၊ နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း(ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီမှာပင် မုန်တိုင်းအဖျားပိုင်းက ကမ်းခြေကို စတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းဗဟိုသည် ၂၄ နာရီအတွင်း Chennai . . . → Read More: အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE ၂၄ နာရီအတွင်း ကုန်းတွင်းသို့ ဝင်ရောက်တော့မည်
2 comments Uncategorized အားအလွန်ကောင်းသော အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသည့် THANE
By mmweather.ygn, on December 28th, 2011%
CAT-1 အဆင့်ရှိလာသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အားအလွန်ကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါဇယားတွင် TSR မှ THANE ၏0hrs to 48 hrs အထိ တည်နေရာနှင့် ပြင်းအားအဆင့်များကိုဖေါ်ပြထားရာ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ညနေ ၆ နာရီခွဲတွင် လေတိုက်နှုန်း ၇၀ နော်တီကယ်မိုင်(၈၀.၅၅၄၆ မိုင်) အထိရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရပါသည်။ အဆင့်-၁ အားအလွန်ကောင်းသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီအထိ ဆက်လက် တည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဇယားတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
ပိုမိုအားကောင်းလာသည့် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း . . . → Read More: အားအလွန်ကောင်းသော အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဖြစ်လာသည့် THANE
One comment Uncategorized Tropical Cyclone THANE – နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်း(CHENNAI)မြို့ ၏ အရှေ့-အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၃၃၀ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုကိုးကျွန်း အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် ၅၇၅ မိုင်ခန့်၊ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၇၂၀ ခန့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၇ မိုင်နှုန်းခန့်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ ၁၂ နာရီအတွင်း(ဒီဇင်ဘာ ၂၈ . . . → Read More: Tropical Cyclone THANE – နောက် ၁၂ နာရီအတွင်း အဆင့်-၁ ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ဖြစ်လာမည်
2 comments Uncategorized ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အိန္ဒိယကမ်းခြေသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်
By mmweather.ygn, on December 27th, 2011%
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း “သိန်း” THANE (06B) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း အားကောင်းသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း (CAT-1 Cyclone) အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်း NRL မှ မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် data များအရ သိရပါသည်။
မုန်တိုင်း THANE သည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမီလ်နာဒူးပြည်နယ် ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့ဘက် မိုင် ၄၄၀ ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ – အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ် – ကိုလ်ကတ္တားမြို့တောင်ဘက် မိုင် ၇၀၀ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၆၀၅ မိုင်ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၆၅၀ မိုင်ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း . . . → Read More: ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း THANE ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး အိန္ဒိယကမ်းခြေသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားမည်
Leaveacomment Uncategorized ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်း 06B အား THANE(သိန်း)ဟု အမည်ပေးပြီ
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းမှ အပူပိုင်းဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း 06B(SIX) အား အလှည့်ကျ မြန်မာအမည် “သိန်း” (THANE) ဟု ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါသည်။
မုန်တိုင်း THANE(သိန်း) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီအတွင်း အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၅ မိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း၊ တည်နေရာ ခန့်မှန်းချက်မှာ –
မြန်မာနိုင်ငံ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၆၀၀ ခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် ၆၆၅ မိုင်ခန့်၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်း မြို့ အရှေ့ဘက် ၄၈၅ မိုင်ခန့်၊ ပို့ဘလဲယားကျွန်း-ပို့ဘလဲယားမြို့ အနောက်စူးစူး မိုင် ၃၇၀ ခန့် တွင် ဗဟိုပြုနေကြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ . . . → Read More: ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်း 06B အား THANE(သိန်း)ဟု အမည်ပေးပြီ
Leaveacomment Uncategorized မုန်တိုင်း 06B-SIX ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဆက်လက် ဗဟိုပြုနေ
By mmweather.ygn, on December 26th, 2011%
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 06B(SIX) သည် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ တွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၁၈ မိုင် နှုန်းခန့် ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ချင်နိုင်းမြို့ အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၅၉၀ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ပုသိမ်မြို့ အနောက်တောင်ဘက် ၆၁၀ မိုင်ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုးကိုးကျွန်း အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၄၂၀ ခန့်တွင် ဗဟိုပြုနေပါသည်။
မုန်တိုင်း 06B သည် နောက်ဆုံး ရရှိသည့် data များအရ အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ကွေ့သွားပြီးမှ အရှေ့ဘက်သို့ ပြန်လည် ဦးတည် ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းထားပြီး၊ ကုန်းတွင်းသို့ . . . → Read More: မုန်တိုင်း 06B-SIX ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဆက်လက် ဗဟိုပြုနေ